Xhaka iyo Aubameyang oo Arsenal guul muhiim ah ka siiyeen United sidoo kalena kaalinta 4-aad la wareegeen | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Xhaka iyo Aubameyang oo Arsenal guul muhiim ah ka siiyeen United sidoo kalena kaalinta 4-aad la wareegeen
Kooxda Arsenal ayaa 2-0 guusha kaga qaadatay naadiga Man United kulan ka tirsanaa EPL waxaana cayaartan Gunners-ka guushan muhiimka ah siiyeen Xhaka iyo Aubameyang kuna soo celiyeen Arsenal booska 4-aad kala sareynta horyaalka Ingiriiska.
Cayaartan adag ayaa si xamaasad ku dheehan ku bilaabatay waxaana jawiga garoonka sii badalay markii Xhaka hogaanka Arsenal u dhiibay daqiiqadii 12-aad wuxuuna dhaliyay darbad xoogan asigoo goosha meel fog kasoo toogtay wuuna celin waayay goolhaye De Gae markii kubada jihadiisa wax yar ka weecatay.
Man United ayaa jawaab celin rabtay balse nasiib daro Fred ayaa kubad iska qasaariyay kuna dhawaaday inuu cayaarta bar baro ka dhigo daqiiqadii 19-aad wuxuuna iska lumiyay kubad uu Pogba ku lug lahaa.
Lukaku ayaa sidoo kale fursad helay daqiiqadii 36-aad wuxuuna isku dayay inuu goolhaye Leno kubada la dhaafo balse waa laga bad baadiyay darbadii uu riday.
Qaybta hore cayaarta ayaa lagu kala nastay ayadoo 1-0 hogaanka Arsenal ku heyso ayadoo United dadaal wacan sameesay waxayna labadan koox cayaarayeen kubad furan.
Markale Lukaku ayaa ku dhawaaday inuu cayaarta United kusoo celiyo daqiiqadii 51-aad balse goolhaye Leno ayaa ka celiyay oo kulankan bandhig wacan ka muujiyay.
Arsenal culeeska ayaa ka dagay markii gool ku laad loo dhigay waxaana xerada ganaaxa lagu jalaafay Lacazette ayadoo qaladka uu galay Fred daqiiqadii 68-aad waxaana rigooradii gool u badalay Aubameyang daqadii 69-aad.
Arsenal ayaa ku dadaashay inay hogaankeeda labad gool ilaashato inkastoo kulankan 5-daqiiqo lagu daray haddana Gunners-ka ayaa 2-0 guusha ku qaateen kuna soo laabteen kaalinta 4-aad.
Man United waxaa ku dhacday guuldaradii ugu horeesay EPL tan iyo markii macalin Solskjaer kooxdan la wareegay waxayna u dhaceen booska 5-aad.
Previous: Wolves oo taako u dhigtay Chelsea iyo Hazard oo kooxdiisa guuldaro ka bad baadiyay
Next: Real Madrid oo guul muhiim ah ka gaartay kooxda Real Valladolid xili lagu wado in isbuucaan dhexdiisa shaqada macalinimo u magacaabaan Jose Mourinho.